Iran: Krizy Nokleary, Antenina TV Zanabolana Vaky & Mpianatra Nogadraina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2017 7:15 GMT
Mihevitra i Dowdani fa ny olana sy ny fahasamihafana rehetra misy eo amin'i Iran sy ny firenena matanjaka manerantany dia azo vahana amin'ny fomba ara-drariny ary manantena fa hisy ny fifanakalozan-dresaka eo amin'i Iran sy ireo firenena matanjaka manerantany [Fa]. Hoy koa izy
Irane Emrouz nanoratra fa hatramin'izao, tsy nanao fanambarana momba ny sosokevitra Iraniana ny G 5 + 1, ary mampiseho izany fa mbola afaka manantena ny hisian'ny fifanakalozan-dresaka isika [Fa]. Manampy i Emrouz fa mbola azo apetraka ny sazy, satria tsy nanaiky hampiato ny tetikasa fampiroboroboana oranioma i Iran raha nangataka izany ny Fila-kevi-piarovan'ny Firenena Mikambana.
Ny krizy nokleary no mety ho antony iray ao ambadiky ny fanasaziana ny antenina zanabolana mba hifehezana ny fantsona fampahalalam-baovao. Taorian'ny fanivanana ny aterineto sy ny fanakatonana gazety maro, lasa lasibatra vaovao ny antenina fahitalavitra zanabolana malaza. Bilaogera roa miizara amintsika ny fihetseham-pony sy sary amin'ity lalao an-kiafina ity.
Behesht indray namoaka sary maromaro mahaliana mba hampisehoana ny zavatra nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ny antenina fahitalavitra zanabolana ao Pardisan, tanàna manodidina azy. Nilaza tamim-piesoesoana i Behesht fa indrisy, miasa iray andro isa-taona ireo rahalahy ireo mba ho avy hanimba ny antenina antsika. Te handefa antsika any paradisa izy ireo! Nandritra ny adiny roa, nanjary tahaka an'i Palestina ny faritra misy antsika ary nianjera teo ambony lohantsika ny sahafa antenina!
Nilaza i Anjomaniha fa ao Ahvaz, nosamborina i Mehdi Makaremi, na dia tsy nisy vaovao aza ny antony nahatonga ny olona tsy nahazo nitsidika azy , [Fa]. Niara-niasa tamin'ny gazetiboky maromaro tao an-toerana tao amin'ny faritanin'i Khuzestan i Makaremi.